Maxaa Cusub – Page 10 – Shabakadda Amiirnuur
Dhegeyso:- Soomaalida Koofur afrika ku gnacsada oo xaaladdu ku xun tahay.
Koofurka Afrika waxaa si is daba joog ah uga dhaca dilalka loo geysanayo Dadka Soomaaliyeed ee gancsiga ku leh waxaana howshaas fulinaya Burcad Koofur Afrikaaan ah oo dilka kadib boobaya wixii hanti ah oo ay haystaan. dhawaan waxaa ka dhacay dilal murugo ku abuuray Soomaalida halkaa ku dhaqan ka gaddaal […]
DHEGEYSO:- GURI MARTIYEED MARAYKANKU DUMIYAY OO DIB LOO DHISAY.
Guri hooy u ahaa dadka Martida ah ama Safar ah ayaa kuna yaala Kuunyo barrow oo ka tirsan Gobalka Shabeelaha hoose ayaa dib loo dhisay kadib markii 1-dii bishii Janaayo ee Sanadkaan Maraykanku duqeyn ku dumiyay. ugu yaraan sadax qof oo Shacab ah ayaa ku dhaawacmay duqeynta Maraykanku Gurigaas u […]
Mu’asasada warbaahineed ee Al Kataa’ib ayaa baahisay kalimad uu jeediyay Amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab Sheekh Abuu Cubeyda Ahmed Cumar , taasoo ka hadleysa halgankii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan Allaah ha u naxariisto’e. Kalimada Sheekha ayaa Cinwaan looga dhigay (Allow Yaa Darwiishkii Farriin debecsan gaarsiiya), waxaana […]
Howlgal gaar ah oo ciidamada Xarakada Mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Gaalkacyo ee bartamaha dalka Soomaaliya waxey ku dileen askari ka tirsanaa sirdoonka maamulka Puntland kaasoo asigoo dhar cad ah Bulshada ka dhex shaqeynayay. Jaajuuskaan waxaa la oran jirayay Jamaal Faarax Aadam wuxuuna caan ku ahaa dhibaateynta iyo jaajuusida […]
Laba askeri oo ka tirsanaa Ciidamada Sirdoonka Dowladda Federalaaka ah ayaa Maanta ayaa lagu dilay Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa toogtay xubnahaan sirdoonka ka tirsanaa waxaanay ka qaateen laba bastooladood oo ay wateen. Geesta kale Isla Magaalada Muqdisho Maanta waxaa qarax lagula beegsaday […]
Taliye Xigeenka Malateriga Dowladda Federaalka ah Cabbaas Amiin Cali ayaa Maanta qarax lagula beegsaday inta u dhaxeysa Tarabuunka iyo Deegaanka lambar Afar ee Magaalada Muqdisho. waxaa la sheegay in qaraxaas uu ka bad baaday laakiin ugu yaraan laba ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah ayaa ku dhintay sadax kalena waa […]
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Xalay iyo Shalay fuliayy weeraro kala duwan oo ka dhan ah Shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo qaarka mid ah Ciidamada Maamulada Soomaalida ah ee la shaqeeya. Midka mid ah weeraradaan ayaa Xalay ka dhacay Fariisinka Ciidamada Itoobiya ku leeyihiin Deeganka Halgan ee Gobalka Hiiraan. […]
Maxkamadda Islaamiga ah ee Wilaayada Baay iyo Bakool ayaa Xukun qisaas ah ku riday Nin gacan ku dhiigle ah oo nin kale horay ugu dilay deegaan ku yaal Duleedka Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobalka Baay. Fagaare ku yaala Deegaanka Buullo Fullaay ee Gobalka Baay ayaa lagu toogtay Nuur Isxaaq Aadan […]
Ciidamada Xarakaada Shababul Mujaahidiin ayaa howlgal qorshaeysn ka fuliyay Gudaha Dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumeysato. weerar ka dhacay Tuulada Sheekh Barrow oo hoos tagta degmada Lafeey ee Gobalka Mandheera ayaa lagu dilay Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Afka duubta ee weerarada ku qaada dadka Muslmiinta ah ee Kenya gumeysato. Dilka […]
Dhegeyso Laba askeri oo dabax daba jeex iyo sadax aake wata oo isu dhiibay Alshabaab
Laba Askeri oo walaalo ah oo ka tirsnaaa Ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa isu dhibay Xarakada Shabaabaul Mujaahidiin iyagoo wata afar qori oo mid yahay Qoriga qaaliga ah ee daba jeexa. Askartaan ayaa lagu soo dhaweeyay Magaalada Jilib ee Xarunta Wilaayaada Jubbooyinka halkaasoo horay loogu soo bandhigay askar badan oo ka […]
DAAWO: Filim Cajiib ah oo ay soo saartay Mu’asasada Alkataa’ib
SIDEE LOOGA CIIDAY MAGAALADA MUQ AQABLE EE GOBALKA HIIRAAN?
Sawirro: Magaalada Ceelbuur oo si heer sare ah looga dabaal degay.
Kuunya Barrow Oo Si Cajiib Ah Looga Ciiday. (Sawirro Indhaha Uroon).
Sawirro Magaalada Jilib Iyo Dabaal Daga Ciidul Fidriga